Satria... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Poety sa poeta ? Samy manana ny fanorany azy ny tsiairay. Mitory fa miaina ny teny anaty voatany sy voambolana. Olona roa no maneho ny heviny momba ny asan’ny poety na poeta. Mirediredy sa mamelona nofy ? Ny iray ato antrano ary ny iray vahiny nampiantranoana. Tsy fifaninanana akory fa hevitra roa aroso.
Manoratra aho fa tsy Poety
Manoratra aho fa tsy poety,
Ny rima no ampiadiana
Araka izay tiana
Sy izay maha metimety.
Mandrary voambolana na voanteny
Rehefa mahita zavatra eny ho eny
Na koa raha sendra fety
Indrindra sendra mahamay
Mamoaka izay mavesatra tao anaty.
Tsy mikendry ny soa na hanabe
Izany dia avelako ho an’ireo mpanabe
Ny ahy ny eritreritro mitety tanety.
Manoratra aho izao fa tsy poety
Avelako eo ny penina
Sao izaho hanenina
Avelako ho anao ny toerana… ry Ikaloyna Vony
afaka mahita ny miafina rehetra
dia sahia mamboly nofy.
Sahia mamboly nofy
any amparahatoky ny saina babangoana :
ho rano hiboiboika anaty tany foana
fa hay izao ny tany...
ka indro miandry anao
hamola nofo vaovao
nateraky ny TENY.
Teny tonga nofy,
Nofy tonga nofo ...
Anananao ny hery tsy hita fetra
hanova ny tantara.
Smooth night 2018 : Airtel Madagascar accorde ses notes avec celles d’Ivenco pour cette année - il y a 5 jours
30 avrily 2009 - 30 avrily 2018 : Feno 9 taona nizarana ny kanto ny PoetaWebs - il y a 1 moi